Nyeinlatt.com: iOS 7.1, iOS 7.1.1 နဲ့ iOS 7.1.2 တို့အတွက် အလွယ်ကူဆုံး Jailbreak လုပ်နည်း နှင့် Myanmar Font and Keyboard ထည့်နည်း
iDevices တွေကို jailbreak လုပ်ဖို့ အောက်ပါအဆင့်အတိုင်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Step 1: Pangu latest version ကို အောက်ပါ link မှ Download လုပ်ယူပါ။
(For Window version and Mac)
Step 2: Download လုပ်ထားတဲ့ Pangu.exe application အပေါ်ကို Right Click လုပ်ပြီး “Run as Administrator” option ကိုနိုပ်ပါ။
Step 3: iDevice ကို computer နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Jailbreak အမဲရောင် ခလုပ်လေးကိုနှိပ်ပါ။
Step 4: iOS Device မှ Date ကို2Jun 2014 သို့ပြောင်းပါ။ (go to Settings -> General -> Date & Time).
Step 5: iDevice Home screen အပေါ်မှ pangu app ပုံလေးကိုနှိပ်ပါ။ continue နှိပ်ပါ။ restart ခဏခဏ လုပ်တာကိုစောင့်ပါ။ Home screen အပေါ်မှာ Cydia app လေးပေါ်လာပြီး jailbreak လုပ်ပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
*Jailbreak လုပ်ပြီးသွားရင် Date & Time ကို ပုံမှန်အချိန်အတိုင်း ပြန်ချိန်လို့ရပါတယ်။
To install Myanmar Font and Keyboard
Myanmar Font and Keyboard တို့ကို install လုပ်ဖို့ iDevices တွေကို jailbreak လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။
1) Cydia ကိုဖွင့်ပြီး Sources အောက်က Edit ကိုနိုပ်ပါ။
2) "Add" ကိုနိုပ်ပါ။
3) http://cydia.myrepospace.com/komin27/ လို့ ရိုက်ထည့်ပေးပြီး Add Source ကိုနိုပ်ပါ။
4) Add ပြီးရင် Komin27 - MyRepoSpace..... ထည်းကိုဝင်ပါ။ Zawgyi Font for iOS7 (OR) Zawgyi iOS7Font ကိုရှာပြီး install လုပ်ပါ။ iPhone ရဲ့ Notes အပေါ်မှာ Zawgyi Font ကိုမြင်နိုင်ဖို့ Zawgyi-One Fix for Notes ကို install လုပ်ပါ။
5) Keyboard အတွက် MMKeyboard for iOS 7+ ကို install လုပ်ပေးပါ။
6) Myanmar keyboard ကို install လုပ်ပြီးသွားရင် Setting > General> Keyboard> Keyboards> Add New keyboard...ကိုသွားပြီး Czech ကိုရွေးပေးပါ။
အဲဆို Jailbreak နဲ့ မြန်မာစာ၊ မြန်မာကီဘုတ် သွင်းတာပြီးဆုံးပါပြီ။
Posted by Nyein Latt at 9:02 PM
Myo Thein Oo July 19, 2014 at 10:03 PM
Zawgyi iOS7Font doesn't work in ios 7.1.2
Nyein Latt July 19, 2014 at 11:39 PM
It is not working on Notes only. It is working on Facebook, Safari, Mail, Viber and Messages in system IOS 7.1.2.
Nyein Latt July 21, 2014 at 1:03 AM
I've updated my post today. Now, Zawgyi Font is working on Notes also.
Myo Thein Oo July 23, 2014 at 11:18 PM
ကျွန်တော်ပြောတဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာ macforus ရဲ့ဇော်ဂျီပါ။ ကိုသန့်သက်ရဲ့ဟာကတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် macforus လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟုတ်ပါဘူး။စာလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး၊အပေါ်စာကြောင်းနဲ့အောက်စာကြောင်းတွေကပ်လွန်းတယ်။စာကြောင်းအောက်ပိုင်းတွေပြတ်နေတယ်။
thank you Nyein Latt
Kaung Myat August 15, 2014 at 9:37 PM
ဘယ်သူ တွေ ဘာပြောပြောဗျာ . . ကျနော်ကတော့ တကယ်ကျေးဇူးကို ဟဲဗီးတင်တယ်ဗျာ
အကို ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေ စိတ်ချမ်းသာ စိတ်ကျန်းမာ ပါစေအကို ဘာလုပ်လုပ် အဆင်ပြေပါစေဗျာ :D :D
Nyein Latt August 16, 2014 at 3:29 AM
အခုလို ဆုတွေအများကြီးတောင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊၊ ပေးတဲ့ဆုတွေ အားလုံးပြည့်ပါရစေဗျာ၊၊
win naingoo August 25, 2014 at 1:42 PM
Thank you for your kindness and hard working on font and keyboard for i devices.
mack alex September 19, 2014 at 1:21 PM
ကျွန်တော် မရဘူးဖြစ်နေတယ် iPhone 3,1 with iOS 7.1.2 (11D257) already jailbroken ဆိုပြီးပဲပေါ်တယ် Jailbreak ခလုတ် အမဲလေးက နှိပ်လို့မရဘူး။ 7.1.1 တုန်းက အဆင်ပြေပါတယ်၊ ကျွန်တော် 7.1.2 ကို iTunes နဲ့ Upgrade လုပ်ခဲ့တာပါ၊ ကျွန်တော့် ဖုန်းက iPhone4ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါ Jailbreak လုပ်မှ အဆင်ပြေမှာကြောင့်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Nyein Latt September 19, 2014 at 4:31 PM
Restore လုပ်ပြီး jailbreak လုပ်ကြည့်ပါလား၊၊
zay phyo October 14, 2014 at 11:41 AM
Kyawkyaw09 Kyawkyaw09 September 11, 2015 at 2:32 AM
Kyaw Aung October 21, 2015 at 1:22 AM
ကျွန်တော့် ဖုန်းက iPhone4ပါပေါ်တာချင်းမတူဘူး
Kyaw Aung October 21, 2015 at 1:29 AM
jailbreak လုပ်ပြီးအဆင့်3ထိရပါတယ် အဆင့်4မှာဝင်ပြီး ဇော်ဂျီဖောင့်ရှာမတွေ့ပါအကိုဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲတချက်ပြော
ဘုတ်ပြင်သားလေး January 16, 2016 at 3:51 PM
Naing Naing-Kalaw ( Trekking And Biking ) January 29, 2016 at 3:39 PM
Leonardo Darvinchi March 20, 2016 at 2:48 PM
Tun Min February 16, 2016 at 9:14 AM
Ko Naing Naing-Kalaw ရေ ကျေးဇူးဗျာ...
Thank ပါ အကို
Cydia jump ဖြစ်​သွားပီး zawgyi font for ios4 ​ကော zawgyi font for ios7.1.2 ​ကော သွင်းမရ​တော့ဘူး
Icleaner ကလည်း အလုပ်​မလုပ်​ဘူး
ဘူးသီး ​မောင်​ March 15, 2016 at 9:44 AM
Ko naing naing kalaw ကို​ကျေးဇူးအများကြီးတင်​ပါတယ်​
Thet hmu swe ကသွင်းတုန်းက jamp ဖြစ်​​နေတာsafari က​တော့ crush ဖြစ်​​နေလို့
Ifile ​လေးကို ttkz.me/apt source မှာထည့်​​ပေးပါဦး